Arduino + Bluetooth, ihe atụ na ihe ngwọta maka ọrụ onwe anyị | Akụrụngwa n'efu
Nkwukọrịta n'etiti bọọdụ eletrọniki bụ ihe anyị niile chọrọ n'otu oge maka ọrụ anyị. N'ihi ya, ọrụ dịka IoT ma ọ bụ Intanet nke Ihe bilitere iji mepụta ngwaọrụ ndị dị mma. Ma ha niile choro mbadamba nwere eriri ikuku dika Bluetooth ma obu wireless. Ọzọ anyị na-agwa gị ihe Arduino + Bluetooth bụ na ohere ọ bụla ma ọ bụ ọrụ nwere ike iji teknụzụ a.
1 Gịnị bụ Bluetooth?
2 Kedu ogwe Arduino nwere Bluetooth?
3 Kedu ihe anyị nwere ike iji Arduino + Bluetooth mee?
4 WiFi ma ọ bụ Bluetooth maka Arduino?
Gịnị bụ Bluetooth?
Ikekwe site ugbu a onye ọ bụla maara teknụzụ Bluetooth, teknụzụ ikuku na-enye anyị ohere ijikọ ngwaọrụ ọnụ iji zipu data n'etiti ha ngwa ngwa na arụmọrụ ọ dịghị mkpa maka ebe nzukọ ma ọ bụ router. Teknụzụ a dị n'ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka, site na mbadamba na ngwa ndị ọzọ dịka ekweisi na ihe ndị dị ka smartphones ma ọ bụ kọmputa desktọọpụ.
Teknụzụ Bluetooth yana njikọ ikuku dị mkpa na Internetntanetị nke Ihe, ọ bụghị naanị n'ihi na ọ bụ akụkụ bụ isi mana n'ihi na ngwaọrụ dị iche iche na Bluetooth na-eme ka netwọkụ ma ọ bụ ntanetị data dị n'etiti ngwaọrụ dị nkenke ma ọ dabere na ọtụtụ isi nke njikọ ma ọ bụ ọnụ data. Maka ihe a niile, Teknụzụ bluetooth dị ugbu a na ọrụ na Arduino, IoT na ọbụlagodi ụdị ọhụrụ Raspberry Pi.
Enwere otutu nsụgharị nke Bluetooth, nke ọ bụla na-emeziwanye na nke gara aga ma ha niile na-enye otu nsonaazụ ahụ mana na ngwa ngwa na obere ume ike. N'ihi ya, Arduino + Bluetooth bụ a Nchikota kasị eji na nkà na ụzụ ụwa.
Agbanyeghị, ugbu a ọ dịghị ihe nlereanya nke Arduino UNO nke ahụ nwere bluetooth site na ndabara nakwa na onye ọrụ ọ bụla nwere ike iji teknụzụ a na ndabara. Nke a bụ ihe anyị kwesịrị ịchọta ma ọ bụ site na ọta ma ọ bụ kaadị mgbasa ma ọ bụ site n'ụdị pụrụ iche dabere na Arduino Project.
Na nso nso a ka ejikere eji eme ihe ohuru maka ngwaọrụ nwere teknụzụ Bluetooth, nke a dabere n'iji ngwaọrụ Bluetooth dị ka mgbama ma ọ bụ ngwaọrụ dị mfe nke na-ebunye amaokwu mgbe ọ bụla. Usoro mgbama a ma ọ bụ mgbama ahụ na-eme ka ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ịnakọta ụdị akara ma nye ohere maka geolocation yana ụfọdụ ozi enwere ike nweta na teknụzụ dịka njikọ 3G ma ọ bụ ebe nnweta ikuku.
Kedu ogwe Arduino nwere Bluetooth?
Dịka anyị kwuburu, ọ bụghị mbadamba Arduino niile dabara na bluetooth, kama nke ahụ, ọ bụghị ụdị niile ejiri bluetooth wulite n'ime bọọdụ ha. Nke a bụ n'ihi na amụtaghị teknụzụ dịka nnwere onwe dị ka teknụzụ ndị ọzọ ma ọ bụghị ọrụ niile Arduino chọrọ bluetooth, ya mere e kpebiri hapụ ọrụ a ka ọta ma ọ bụ mbasa mmụba dị adị ma nwee ike jikọta ya na bọọdụ Arduino ọ bụla ma rụọ ọrụ otu ọ dị ka a ga-etinye n'ọrụ ya na motherboard. N'agbanyeghị nke a, enwere ụdị ndị nwere Bluetooth.
Modeldị kachasị ewu ewu na nso nso a akpọrọ ya Arduino 101. Efere a na-eme akpa osisi Arduino nwere Bluetooth, nke akpọrọ Arduino Bluetooth. N'ime efere abụọ a ka anyị ga-agbakwunye nke BQ Zum isi Otu ụlọ ọrụ Arduino na-abụghị nke mbụ mana nke ahụ sitere na ọrụ a na nke sitere na Spanish. Atọ ndị a dabere na Arduino Project ma nwee ikike iji nkwurịta okwu site na Bluetooth. Mana ọ bụghị naanị ọzọ dị ka anyị kwuru. Enwere efere mgbatị atọ ọzọ Ha na-agbakwunye ọrụ Bluetooth. Mgbatị ndị a A na-akpọ ha Bluetooth Shield, Sparkfun bluetooth Module na SeedStudio bluetooth Shield.
Mbadamba ndị ahụ nwere Bluetooth na nhazi nke ntọala ahụ, ndị a kpọtụrụ aha na mbụ, bụ ngwaọrụ ndị dị na ntọala Arduino UNO a na-agbakwunye modul bluetooth na-ekwurịta okwu na akụkụ ndị ọzọ. Ewezuga Arduino 101, ihe nlere nke gbanwere nke ukwuu banyere mbadamba Arduino ndị ọzọ ebe ọ nwere 32-bit ije, na-enwe ike karịa ụdị ndị ọzọ n'ime Arduino Project. Ọ bụ ezie na n'eziokwu, ọnụ ọgụgụ nke efere na-belata nke ukwuu ebe ọ bụ na anaghị eresị ma ọ bụ kesaa ụfọdụ ụdị na anyị nwere ike nweta ya naanị site na nka ọrụ aka ya, dịka ọ dị na Arduino Bluetooth, nke anyị nwere ike nweta naanị site na akwụkwọ ya.
Nhọrọ nke ndọtị ma ọ bụ Ọta Bluetooth na-atọ ụtọ nke ukwuu n'ihi na ọ na-enye ohere iji ya mee ihe. Nke ahụ bụ, anyị na-eji mbadamba maka ụfọdụ ọrụ na-eji bluetooth mgbe ahụ anyị nwere ike weghachite mbadamba maka ọrụ ọzọ nke na-enweghị Bluetooth naanị na-emeghe ndọtị. Akụkụ na-adịghị mma nke usoro a bụ na ndọtị ahụ na-eme ka ọrụ ọ bụla dị oke ọnụ karịa na ọ dị ka a ga - asị na ị zụtara mbadamba Arduino abụọ ọ bụ ezie na ọ bụ naanị otu ga - arụ ọrụ.
Kedu ihe anyị nwere ike iji Arduino + Bluetooth mee?
Enwere ọtụtụ ọrụ anyị nwere ike iji bọọdụ Arduino mana enwere ole na ole chọrọ nkwukọrịta. Ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịchọta ngwaọrụ ọ bụla nwere bluetooth ugbu a, anyị nwere ike dochie ọrụ ọ bụla chọrọ ịnweta ịntanetị na bọọdụ nwere Arduino Bluetooth wee zipu ịntanetị site na Bluetooth. Anyị nwekwara ike ike smart ọkà okwu ekele Arduino + mbadamba Bluetooth ma ọ bụ mepụta mgbama iji mata ebe ngwaọrụ dị. Ọ baghị uru ikwu enwere ike iji ihe eletrọniki a wuo ihe ndi ozo dika keyboards, mouse, ekweisi, igwe okwu, wdg, ebe ọ bụ na ugbu a ọ bụla sistemụ na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na Bluetooth technology.
N'ebe nchekwa dị ka Ozizi anyị pụrụ ịchọta imirikiti oru ngo na-eji Bluetooth na Arduino na ọrụ ndị ọzọ na-anaghị eji Arduino + Bluetooth mana nke ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na ya yana mgbanwe dị mkpa.
WiFi ma ọ bụ Bluetooth maka Arduino?
WiFi ma ọ bụ Bluetooth? Ezigbo ajụjụ nke ọtụtụ ga-ajụ onwe ha, ebe ọ bụ na maka ọtụtụ ọrụ ihe njikọ Wi-Fi na-eme, njikọ Bluetooth nwekwara ike ịme. Na mkpokọta, anyị ga-ekwu maka uru na isi ihe abụọ nke teknụzụ, mana na nke a, na oru na Arduino, anyị ga-eleba anya n'ihe dị ezigbo mkpa: mmefu ume. N'otu aka, ị ga-eleba anya n'ihe ike anyị nwere wee si ebe ahụ kpebie ma anyị ga-eji Wi-Fi ma ọ bụ Bluetooth. Na mgbakwunye, anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ịntanetị ma ọ bụ ebe nnweta, ebe ọ bụ na enweghị nke ahụ, njikọ ikuku abaghị uru maka ọtụtụ. Ihe na-anaghị eme na Bluetooth, nke na-achọghị ịntanetị, naanị ngwaọrụ iji jikọta ya. Nyere Ihe abụọ a ga - ahọrọ ma ọ bụrụ na ọrụ anyị ga - ebu Arduino + Wifi ma ọ bụ Arduino + Bluetooth.
Onwe m, echere m na nhọrọ ọ bụla dị mma ma ọ bụrụ na anyị nwere ezigbo ọkọnọ na nnweta Internetntanetị, mana ọ bụrụ na anyị enweghị ya, m ga - ahọrọ Arduino + Bluetooth, nke na - achọghị teknụzụ dị ukwuu yana nkọwapụta ọhụụ kachasị ume ma dịkwuo irè iji ya. Ma gị Kedu teknụzụ ị ga-eji rụọ ọrụ gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Arduino+Bluetooth